အင်္ဂလန်နိုင်ငံဗဟိုဘဏ်၏ အထူး ကြာသာပတေးနေ့ဆွေးနွေးပွဲ
သြဂုတ်လ ၃ရက်နေ့သည် အင်္ဂလန်ဗဟိုဘဏ်(BoE)၏ ယခင် ပုံမှန်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေကျ နေ့တစ်နေ့ဆိုတာထက် ထူးခြားအရေးပါသည့် နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါသည်. ငွေဖောင်းပွမှုဆိုင်ရာ သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည့်အပြင် ငွေကြေးမူဝါဒဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်. ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို ၁၄:၀၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်. ထို၁၄:၀၀ MTအချိန်တွင်ပင် အင်္ဂလန်ဗဟိုဘဏ် အကြီးအကဲဖြစ်သူ Mark Carney၏ စကားပြောမည့်အစီအစဉ်ပါရှိသည့်အတွက် ထရိတ်ဒါများအနေဖြင့် ထိုအချိ်န်ကို လက်မလွတ်တမ်း စောင့်ကြည့်သင့်ပါသည်.
BoE၏ ငွေကြေးမူဝါဒကော်မတီသည် လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၁နောက်ပိုင်း အတိုးနှုန်းကိစ္စနှင့်ပက်သက်ပါက ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လအတွင်းတွင် ကော်မတီဝင်အကြီးအကဲ အချင်းချင်း သဘောထားကွဲလွဲမှု ပိုများလာတာကို တွေ့လာရပါသည်။ ဇွန်ဆွေးနွေးပွဲတွင် အဖွဲ့ဝင် ၅ဦးက ယခင်အတိုးနှုန်း ၀. ၂၅%အတိုင်းသာ မပြောင်းမလဲ ထားရှိဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပြီး ကျန်အဖွဲ့ဝင် ၃ဦးကတော့ အတိုးနှုန်းတင်လိုတဲ့ ဆန္ဒရှိနေခဲ့တာကို တွေ့ရပါသည်. ဈေးကွက်ကတော့ သြဂုတ်လအတွင်း အတိုးနှုန်းတက်မည့်အရေးမြင်နေရပြီလို့ ပြောဆိုနေကြတာ ဖြစ်ပါသည်. သို့ရာတွင်တော့ ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လအတွင်း UK၏ ငွေဖောင်းပွမှူနှုန်းသည် မမျှော်လင့်ဘဲ ၂. ၆%အထိ ကျဆင်းလာခဲ့သည့်အတွက် ထရိတ်ဒါအများစုကတော့ အတိုးနှုန်းတင်နိင်ခြေကို စပြီး သံသယ၀င်လာနေကြပြီ ဖြစ်ပါသည်.
ထိုကဲ့သို့သော မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့် အင်္ဂလန်ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် မည်ကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမျတ်မည်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းရခက်နေပြီး GBPနှင့် ဆက်စပ်နေသော ငွေကြေးအတွဲအားလုံးအတွက် အလှုပ်အခတ်ကြီးမားနိုင်မည်ဟု ဈေးကွက်က ခန့်မှန်းထားကြပါသည်. အတိုးနှုန်းတင်ခဲ့ပါက GBP/USD ကာလတိုအချိန်တစ်ခုစာ ထိုးတက်သွားနိုင်ပြီး ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့်အတိုးနှုန်း တင်မည့်အရေး နောက်ဆုတ်သွားပါက ပေါင်စတာလင်တန်ဖိုး ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်.